Moto G4: nyocha na echiche mgbe otu ọnwa gachara | Gam akporosis
Alfonso de Frutos | | Lenovo, Motorola, Nyocha
Ọgbọ nke anọ nke ezinụlọ Moto G ọ bụ ebe a. Motorola nwere ihe ijuanya na nke ọhụụ Moto G4 na Moto G4 Plus n'ihi ọtụtụ ihe: nnukwu ihuenyo ya na mbipute kachasị elu na ihe mmetụta mkpịsị aka.
Ọ bụ Lenovo ziri ezi na mgbanwe ndị a? Mgbe ọnwa nke iji m wetara gị zuru nyocha vidiyo nke Moto G4 Enwere m ike ịsị na, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado ogbugba ahụ site na ịzụrụ otu etiti ga-emechu gị ihu, ekwentị Motorola ọhụrụ bụ nhọrọ kachasị mma.
1 Moto ọhụrụ nke ezinụlọ Lenovo, yana Moto G4 na Moto G4 dị ka ọkọlọtọ, chọrọ ịlụ ọgụ maka ahịa dị n'etiti
2 Nzube nke na-agbaso usoro nke ndị bu ya ụzọ
4 Ngosipụta nke na-ezute akara ahụ
5 A zuru okè kachasị batrị na a ngwa ngwa Nchaji usoro
6 Moto UI, interface zuru oke
7.1 Ihe nlere anya nke foto na Moto G4
8 Nkwubi okwu ikpeazụ
Moto ọhụrụ nke ezinụlọ Lenovo, yana Moto G4 na Moto G4 dị ka ọkọlọtọ, chọrọ ịlụ ọgụ maka ahịa dị n'etiti
The mbụ Moto G akara a tupu na mgbe na mpaghara, site echepụta a ọhụrụ nso nke smartphones na ezi atụmatụ na n'ezie mma ahịa. Ka oge na-aga, ndị na-emepụta ihe na-arịwanye elu na bandwagon na-ekepụta ọhụụ ọhụrụ ahụ dị elu nke na-achịkwa ahịa ahụ, na-enye akara nke ekwentị zuru oke zuru oke na ọnụ ahịa knockdown, n’enweghị ihe mgbochi uche nke euro 300.
Ọhụrụ Moto G4 Aims ọzọ ịbụ onye mbụ nhọrọ mgbe na-achọ ezi gam akporo ekwentị na okwu nke uru maka ego. Akwụkwọ ikike ya na-egosi na Motorola / Lenovo na-enweta ekwentị ọhụrụ ya ọzọ, agbanyeghị na enwere ụfọdụ chiaroscuro.
N'otu aka anyị nwere nha ihuenyo nke akara Moto G4, nke na-abawanye ruo 5.5 sentimita asatọ na ike iru eru dị ka phablet. Ọ bụ eziokwu na ahịa ahụ na-arịwanye elu na-egosi ihu ngebichi buru ibu, mana mmegharị a nke Lenovo na-akpata ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ama ama nwere ihuenyo dịkarịrị sentimita 5, ma bụrụkwa onye buru ụzọ họrọ Moto G, wee chọọ azịza site n'aka ndị nrụpụta ndị ọzọ. .
Onwe m echeghị m nke ahụ Mee ka nhaỌbụna ha na-eme Moto G4 ka ọ bụrụ nhọrọ na-adọrọ adọrọ karị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị mbụ maka nwatakịrị 13-17 afọ, onye ga-ahọrọ nnukwu ihuenyo na njedebe nke enwere ike iji otu aka. Mana esemokwu nke iguzogide mmiri ka m tụfuru n'ezie.
Na, ọ bụ ezie na ụdị nke mbụ nwere akwụkwọ IPX nke nyere Moto G iguzogide ájá na mmiri, ihe ọhụrụ Moto G4 naanị nwere nkwụsị na nkwụsị. Enwere ndị mmadụ nwere ike ịtụle na ọ bara uru ma ọ bụ na ọ bara uru na ekwentị nwere ike ide mmiri n'enweghị nsogbu, mana agwalarị m gị na mgbe ị nwere ụdị nke gara aga ma nwee njirimara ahụ, ị ​​nweghị mmasị na ekwentị ọhụrụ enweghị ya.
Nzube nke na-agbaso usoro nke ndị bu ya ụzọ
Moto G4 na-ekwusi ike a imewe yiri ụdị ndị gara aga, idebe plastic dị ka a doro anya protagonist na àjà nnọọ kpochapụwo ahịrị enweghị risking mgbe ọ na-abịa na-egosi a ọhụrụ anya.
O doro anya na ihe kachasị Lenovo bụ idobe ọnụ ala dị ka o kwere mee ka ọnụ ahịa nrụpụta ghara ịrị elu. Ọ bụ eziokwu na ndị ọzọ na-emepụta ihe na China na-amalite ịnye ọnụ na njedebecha ọla dị n'otu ọnụahịa ahụ, Honor 5X bụ ihe atụ doro anya, ya mere na nke a bụ maka m nnukwu adịghị ike nke Moto G4.
Amaara m na ịmechara abụghị ihe mkpebi maka ọtụtụ ndị ọrụ, ndị na-echeghị nkọwa a, agaghị echebara nke ahụ echiche Moto G4 enweghị ahụ aluminom. Tụkwasị na nke a, ọ bụ ezie na ọ naghị enwe ígwè, njedebe ya dị ezigbo mma, ọkachasị mkpuchi azụ nke Moto G4 nke nwere micro-dotted kpuchie ya na nke dị nro ma dịkwa mma.
Oghere plastik ya na-egbuke egbuke na nke ahụ dị mma na-achụpụ mmetụta ahụ plastic ekwentị. Na mgbakwunye, ahụ n'ozuzu na-eguzogide jog kwa ụbọchị nke ọma. Anọ m na-eji ya maka otu ọnwa na-enweghị ụdị nchebe ọ bụla na ekwentị agbadoro n'ụzọ zuru oke.
A ga-atụ anya na ihuenyo ya na Corning Gorilla Glass nchedo ga-eguzogide ọkọlọtọ ọ bụla, mana ọ tụrụ m n'anya ịhụ na ekwentị anaghị ata ahụhụ site na nsị ma ọ bụ eyi mgbe emechara ya.
Ihu ya nwere obere okpokolo agba, ha nwere ike gbalịa ịchekwa obere ohere. Ihe na-adọrọ mmasị na-abịa na n'ihu okwu na ndị otu egwuregwu Motorola edebela na Moto G4. Enwere m mmasị igwu egwuregwu ọ bụla na-enweghị ịpinye ihe ọdịyo maka ugboro atọ.
The n'azụ anya n'ezie mara ma anya, na Motorola logo n'okpuru igwefoto, na aka ekele na micropotted imecha na m na-ekwu okwu na. Tụkwasị na nke ahụ, mkpuchi azụ, nke a na-ewepụ, nwere ihe nchebe na-eme ka ọ ghara iguzogide ntụpọ. Nke a bụ ebe anyị na-ahụ micro micro SIM kaadị abụọ dị ka oghere microSD. Ọ dị njọ na batrị anaghị ewepu.
Su etiti na simulates aluminom na-enyekwa ezigbo aka. N'akụkụ aka nri bụ ebe igodo njikwa olu na bọtịnụ / ngbanye / njedebe nke njedebe dị. Nke ikpeazụ yiri ka ọ bụ nke ọla ma na-enye ihe ike nke na-amata ọdịiche ya na njikwa olu.
Enwere m mmasị n'onwe m ike na Moto G4. E wuru ọnụ ya nke ọma yana ịnwa ọkụ, ọ na - eri naanị kilogram 155. N'ezie, iji ihe dị 153 x 76.6 x 9.8 mm, agwala m gị ugbu a na enweghị ike iji ya aka.
Nnukwu uru nke inwe nnukwu ngebichi bụ na Moto G4 na-aghọ nhọrọ iji tụlee ma ọ bụrụ na ị na-achọ a onodu aku na uba. More ma ọ bụrụ na anyị echebara ngwaike ya echiche, nke, dịka ị ga-ahụ na nyocha vidiyo, ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ egwuregwu vidio ọ bụla ma ọ bụ ọdịnaya multimedia na-enweghị nsogbu.
Akụkụ X x 153 76.6 9.8 mm
Ihuenyo 5.5-anụ ọhịa IPS nwere mkpebi 1920 x 1080 pixel na 401 dpi nwere nchekwa Corning ozodimgba iko 3
Nhazi Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 asatọ-isi (Cortex A-53 anọ dị na 1.5GHz na isi anọ Cortex A-53 anọ na 1.2 GHz)
Nchekwa n'ime 16 GB gbasaa site na MicroSD ruo 256 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 13 megapixel sensor na autofocus / nchọpụta ihu / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p ndekọ vidiyo na 30fps
Igwefoto ihu 5 MPX na n'ihu Ikanam flash na akpaaka HDR
Njikọ DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / A-GPS / GLONASS / BDS / 2G Bands; GSM 850/900/1800/1900; Ndị 3G (HSDPA 850/900/1900/2100 -) 4G band 1 (2100) 3 (1800) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 19 (800) 20 (800) 28 (700) 40 (2300) )
Atụmatụ ndị ọzọ Mgbomume Mgbasa / Ndenye Nchaji Sistemụ
Batrị 3.000 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Ahịa Euro 226.91 na Amazon
Dị ka a tụrụ anya, Moto G4 na-anapụta na ndetu site na ịnye onwe ya dị ka a Mgbaze ekwentị maka ụbọchị ruo ụbọchịa, ihe ichere mgbe elere anya na njirimara ọrụ ya. Motorola agbasiwo ike n'akụkụ a, na-etinye otu n'ime ihe ngwọta solụ Qualcomm kachasị dị egwu, Snapdragon 617 dị ike, bụ SoC nke karịrị ọrụ ya na nke ahụ, tinyere Adreno 405 GPU na 2 GB nke RAM, na-enye ohere ịmegharị egwuregwu ọ bụla. n'ụzọ dị ezigbo mkpa ma na-arụ ọrụ.
Na vidiyo nke nyocha Moto G4, ị ga-ahụla na m gbalịrị egwuregwu vidio dị iche iche chọrọ ike dị ukwuu na enwere m ike ịnụ ụtọ ha na enweghị nsogbu. Ọ dịtụbeghị mgbe m kwụsịrị ma ọ bụ lag mgbe m na-egwu egwu. Na Enweghị akara ikpo oke ọkụ na ọnụ.
Akara nke na-ekewapụta ndị nrụpụta kachasị dị elu site na ndị SoC ndị gbadoro ụkwụ na etiti na-adịwanye njọ ma Moto G4 ngwaike ike bụ ihe doro anya doro anya nke a.
Ma ọ bụ na ọ tụrụ m n'anya site na nyocha arụmọrụ emere na Moto G4, nke nyere m ụfọdụ Nsonaazụ yiri nke Nexus 6. Kpachara anya, anyị na-ekwu maka ekwentị anaghị eru euro 250.
Moto G4 nwere Radio FM na ya ga-eji na-enweghị ekweisi dị ka poolu, dị ka ogologo dị ka anyị na-na mpaghara na-akwa mkpuchi, ihe na m hụrụ n'anya. Aghọtaghị m otú ekwentị si dị n'ahịa na-enweghị FM Radio.
Achọghị m ka m mechie ngalaba a n’ekwughị okwu n'ihu okwu nke Moto G4, nke na-enye ezigbo ụda dị mma na-akpọ anyị oku ka anyị jiri ihuenyo pụrụ iche ya nwee ọdịnaya ọdịnaya ọtụtụ.
Ngosipụta nke na-ezute akara ahụ
Motorola ịkụ nzọ dị nnọọ ike na nkebi a site na ịchụ a 5.5 anụ ọhịa ahụ ya na njiri mara nke bu otutu uzo karie ndi ozo.
Obi abụọ adịghị ya na onye nrụpụta chọrọ ka ahụmịhe onye ọrụ ahụ zuo oke. Ma ọ bụ ihe ziri ezi site na ịkụ nzọ na a IPS panel ruru 1.920 x 1.080 pikselụ na pọdels 401 na anụ ọhịa. Ihuenyo ihuenyo nke Moto G4 dị oke mma, na-enye ọmarịcha agba agba nke nwere oke okike na enweghị nkụju.
Ndị ọcha ya zuru oke, nke na-eme ka Moto G4 bụrụ ọnụ magburu onwe ya maka ịgụ ihe daalụ akụkụ ya dị elu pixel density. Ekwesiri ighota na site na itinye ihe kachasi nma, inwere ike iguta ihe di nma na akwa n'enyeghi oria ihuenyo. akụkụ nlele magburu onwe ya na nnukwu ọdịiche, ogo nchapụta na Moto G4 ihu igwe na-enye anyị ọhụụ zuru oke n'èzí, ọbụlagodi n'ehihie.
Obi abụọ adịghị ya na ihuenyo kachasị mma m hụworo na ekwentị nke na-efu ihe na-erughị euro 300. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ na nnukwu, ihuenyo dị mma na ọnụahịa ezi uche dị na ya, na ị chọghị ịma na ọ nweghị ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, M kwe nkwa na Moto G4 bụ nhọrọ kacha mma. More ma ọ bụrụ na anyị na-echebara gị nnwere onwe dị egwu
A zuru okè kachasị batrị na a ngwa ngwa Nchaji usoro
Motorola na-enweta ezigbo ọkwa dị elu site na obodo kwụụrụ nke Moto G4 ọhụrụ. Ya 3.000 mAh batrị, na-enweghị ewepu, kwere nkwa karịa arụmọrụ zuru oke iji kwado oke ngwaike nke ekwentị, mana atụghị m anya ịrụ ọrụ dị oke mma.
Na-enye a nkịtị ojiji na ekwentị Enweela m ụbọchị abụọ nke ojiji na-enweghị nsogbu, ihe na-eju m anya na-atụle ihuenyo 5.5-inch ya na mkpebi Full HD. Ana m ekwu maka iji ya mee ihe n'ezie na ịgagharị ụgbụ, na-eji netwọk mmekọrịta, na-ege egwu na otu awa n'ụbọchị ... na-etinye ekwentị na ọnọdụ ụgbọelu n'abalị ma na-emechi ngwa ahụ, Moto G4 kwadoro m ụbọchị ọzọ, na-eru n'abalị nke abụọ na 10 -15% ya mere, na-agụta na e nwere ụbọchị na anyị na-eji ekwentị karịa, anyị nwere ike ịnye ya ikike ọchịchị obodo nke 42 awa, ihe ịtụnanya maka ekwentị nwere njirimara ndị a.
Ọzọkwa nke Moto G4 dakọtara na Qualcomm ngwa ngwa nchaji usoroỌ dị njọ na e nwere otu chaja dị na igbe ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, enwere m ike ịnwale sistemụ ahụ na chaja nke nwere teknụzụ a na Moto G4 ka akwadoro n'ụzọ zuru ezu na erughị otu awa.
Moto UI, interface zuru oke
Enwere obere ihe ị ga-ekwu na ngalaba ngwanrọ Moto G4, n'ihi eziokwu ahụ bụ na Motorola na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ntanetị dị ọcha, n'adịghị ka ndị nrụpụta ndị ọzọ. N'ụzọ dị otú a, anyị na-achọta Moto UI, dabere na gam akporo 6.0 M na nke ahụ na-ekwusi ike na ahụmịhe Android dị ọcha nke ọha na eze nwere mmasị dị ukwuu.
Na interface n'ozuzu ọ bụ otu ihe ahụ ka google ọ bụ ezie na Motorola ka webatara a ahaziri aka na-adịghị ewute ọlị. Anyị nwere ike ịhụ ya na wijetị elekere dịka ọmụmaatụ, mana achọrọ m ime ka o doo anya na ọ naghị etinye aka ma ọlị. Iji nye gị otu echiche, Google dum ngwugwu na-adịghị ọbụna tupu arụnyere dị ka ọkọlọtọ.
Ebee ka anyị ga-ahụ ọtụtụ ndị ọzọ? n'ime Ambient ngosi, Motorola magburu onwe ngosi usoro nke ga-egosi anyị oge na ificationsma Ọkwa na a nwa ndabere mgbe buru ihe ọnụ. N'akụkụ aka nke ọzọ Motorola ejirila usoro ngosipụta nke bara uru na nke kensinammuo. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịmacha Moto G4 ntakịrị, igwefoto ga-arụ ọrụ. Na nyocha vidiyo ị ga-ahụ otu ọ dị mfe iji uru nke nhọrọ ndị a na ekwentị.
A 10 maka Motorola na nkebi a. Ọ dịghị ihe dị mma maka onye ọrụ ahụ karịa ekwentị na-ekpofu ahịhịa na Moto G4 na-arụ ọrụ ahụ n'ụzọ zuru oke na nke a.
N'ebe a, anyị banyere otu n'ime ngalaba kachasị mkpa na ọnụ. Ọ dịwanye mkpa na ekwentị nwere ezigbo igwefoto na eziokwu bụ na G4 Jụ ihe ijuanya ọzọ site na ịchụkwute nnụnụ mara mma.
Igwefoto bụ isi nke Moto G4 nwere ihe mmetụta nke 13 megapixels nwere oghere f / 2.0 na autofocus, tinyere ihe ngosi LED abụọ nwere ụda na ọnọdụ Auto HDR nke na-arụ ọrụ nke ọma, yana inwe ike ịdekọ na ogo HD zuru oke.
Na gburugburu n'èzí ọkụ dị mma Igwefoto Moto G4 na - ejide foto dị elu, àjà a nnọọ eke tonality na nso nke na agba. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọnọdụ HDR, arụ ọrụ na ọnọdụ akpaka, na-arụ ọrụ nke ọma n'emepụtaghị oke agba agba. Ezigbo maka ndị ọrụ ahụ chọrọ ịse foto n’enweghị nchegbu nke ukwuu gbasara nhọrọ ị ga-emetụ.
N'ezie, ọ bụrụ na ị maara foto ị ga-a theụrị ọ theụ mode ntuziaka nke ahụ ga - enyere gị aka ịgbanwe akụkụ dị iche iche dịka ikpughe, nchapụta, nguzo ọcha ... Ọ bụrụ na ịchọghị nsogbu, echegbula onwe gị, ngwa igwefoto kensinammuo ga - enyere gị aka ijide foto na oke mma. Ọbụna ijiji aka gị dị mfe ịnwere ike ime ka igwefoto rụọ ọrụ iji jide ngwa ngwa.
N'iburu n'uche nso nke Moto G4 na-agagharị, enwere m ike ịsị na ọ nwere otu igwefoto kachasị mma hụrụ na etiti dị elu.
Ihe nlere anya nke foto na Moto G4
Motorola atụwo m anya na Moto G4. Onye nrụpụta ahụ enyela ntụgharị ọhụrụ site na ịnye ọnụ ọgụgụ dị n'etiti - na-akwụ ụgwọ na-enweghị atụ. Euro 229 maka ekwentị nwere ihuenyo 5.5-anụ ọhịa, arụmọrụ dị mma na ụbọchị 2? Ole na ole ka mma ị ga - ahụ na ọnụahịa ahụ.
Ngosipụta nke nwere ezigbo arụmọrụ
Akụrụngwa na Nexus 6
Igwefoto Moto G4 na-enye ọmarịcha njide
Agunyeghi chaja dakọtara na sistemụ ngwa ngwa
Polycarbonate gwụchara, mgbe ọnụ ndị ọzọ n'otu mpaghara ahụ jirila aluminom
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Moto G4, nyocha na echiche mgbe ọnwa ejirila
Ekwesiri m ịnwa 3 moto g4 ma ha niile ekpo oke ọkụ ma jọrọ njọ site na iji naanị igwefoto na ịdekọ vidiyo na mkpebi ọ bụla na-elokwa batrị ahụ jọgburu onwe ya n'ihi na ha akwụsịghị n'ihi na ha etinyeghị akara nke kpo oku na enweghị lags ma ọ bụrụ na ha na-ata ahụhụ site na gị enweghị ike ịnụ ụtọ igwefoto ha ma ọ bụ kpọọ egwuregwu dị egwu n'ihi na ọ na-ekpuchi ndị na-arụ ọrụ ya, nwee obi eziokwu n'ihi na ha na-agha ụgha, gbalịa ha dịka onye ọ bụla ga-eme ya, na-enye ya ezigbo ojiji ọ bụghị naanị site na otu ụzọ n'ụzọ iri na ikpo oke ọkụ na-abịa mgbe nkeji 10 nke ndekọ na ihe dị ka 5 ma ọ bụ 8 nkeji nke egwuregwu
M na-eji moto g4 gbakwunyere ma eziokwu anaghị ekpo ọkụ ,,,,,,, ma ọ bụ na ọ na-atọghe na egwuregwu egwuregwu ,,,,, Amaghị m ekwentị ị ga-anwale ma ọ dị m ka ị ezighi ezi hehee
ọ na-aga nke ọma, nke m bụ akara ukwu, 2 nke ebule 32 dual sim memory
Zaghachi pio calchin
Onwere onye mara ka esi rụọ ọrụ LED ahụ?
E NWERE M Ọnwa 2 NA G4 MOTORCYCLE M NA-ENWE KAR TH N’UGWU, N’EKPỌ UTARA, Ọ NA-EME, Ọ B C ỌMA NA Ọ B IFR IF na BATRAT IS B IS NT AR FA FALỌ.
Zaghachi NELSON GOMEZ
Mba, ekwentị mkpanaka gị adịghị njọ, Pokemon Go akwụsịla ịrụ ọrụ nwa oge n'ihi ọgụ Ddos